အဘယ်ကြောင့်ရထားပို့ဆောင်ရေး၏အလုံခြုံဆုံး mode တစ်ခုဖြစ်တယ် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အဘယ်ကြောင့်ရထားပို့ဆောင်ရေး၏အလုံခြုံဆုံး mode တစ်ခုဖြစ်တယ်
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 11/12/2020)
ပေါ် polemic ဥရောပတိုက်တွင်ဘတ်စ်ကားနှိုင်းယှဉ်ရထား တစ်ဦး-အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်, လူတိုင်းရဲ့အပေါ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆရတယ်. ဒါပေမဲ့, ကျနော်တို့တောင်မှဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောနေကြသည်, ကျနော်တို့လျှင် - လုံလောက်တဲ့က? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေးခယျြသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘေးကင်းလုံခြုံရေးအမြဲပထမဦးဆုံးလာသင့်တယ်, ကျနော်တို့ဒီနေ့ဖြေရှင်းနေ. အများအားဖြင့်, လူတွေကွဲပြားခြားနားဒီခေါင်းစဉ်ချဉ်းကပ်လေ့, သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နယ်လှည့်အကွိုကျပေါ် မူတည်.. နောက်ထပ်, အတွင်းကမ္ဘာကအချက်န်းကျင်ယာဉ်မတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့စကားကိုနားထောငျနောက်ဆုံးပေါ်သတင်း, အဖြစ်ကောင်းစွာ. သင်တစ်ဦးရထားပျက်ကျမှုတစ်နေရာရာရှိ၏စကားကိုနားထောငျခဲလိမ့်မယ်နေစဉ်, ကဖြစ်ပျက်. ကလေနှင့်အတူမသကဲ့သို့, ကား, ဘတ်စ်ကားနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အခြားနည်းလမ်းများ. သော်ငြားလည်း, စာရင်းဇယားရှင်းရှင်းလင်းလင်းများမှာ - တရားဝင်, ရထားဒီရက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏လုံခြုံဆုံးသည် Modes ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်! သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါငျးတို့သညျအခွားနည်းလမ်းများပြီးနောက်လာစဉ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၏တူညီသောအဆင့်ကိုလေကြောင်းအသွားအလာသွား.
အဘယ်သူမျှမ, မဟုတ်ပါဘူး. အားလုံးသံလမ်းနှင့်ရထားအတူတူအရည်အသွေးမ. ကျနော်တို့ရထားလမ်းခရီးသွားဘေးကင်းလုံခြုံရေးအကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါ, ကျွန်တော်တို့ဟာအများအားဖြင့်တိကျတဲ့တိုင်းပြည်ဆက်စပ်၌အကြောင်းပြောဆို. ယေဘုယျအားဖြင့်, ရထားလမ်းခရီးသွားအလွန်စိတ်ချ, သငျသညျရထားသွားလာလိုလျှင်ဒါပေမယ့်ဆဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့သံလမ်းနှင့်ဆက်သွယ်မှု၏ပြည်နယ်စစ်ဆေးနေထိခိုက်စေပါဘူး.
ဥပမာအားဖြင့်, ကိုယ့်ခုနစ်နှစ်လွန်ခဲ့သော U.S. ရေတွက် 32,367 လမ်းသေဆုံးခဲ့ပြီး, 570 ရထားလမ်းသေဆုံးခဲ့ပြီး, နှင့် 485 လေထုသေဆုံးခဲ့ပြီး. ဤရွေ့ကားရုံကြမ်းတမ်းနံပါတ်များဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမဲ့သူတို့ကရထားခရီးသွားများနှင့်လေကြောင်းခရီးသွားနှစ်ဦးစလုံးထက်သိသိသာသာပိုလုံခြုံဖြစ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦးတော်တော်လေးသိသာရုပ်ပုံပန်းချီပြုပါ လမ်းခရီးသွား.
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အနည်းဆုံးကို Safe နည်းလမ်ဘာတွေလဲ?
ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်သင့်. ရယ်စရာ (မဟုတ်ရယ်စရာဘာမှအဲဒီမှာရှိရဲ့) ဆရာဝန်များကလေ့ဆိုင်ကယ်ရည်ညွှန်း (တနည်း, တဦးတည်းစီးနင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ယာဉ်မတော်တဆမှု) အဖြစ် “အလှူရှင်သံသရာ။” ထင်ရှားစွာ, ဤအမတော်တဆမှုများသောအားဖြင့်သူတို့ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုအလှူရှင်များများများထုတ်လုပ်နိုင်အောင်မကြာခဏနှင့်ဆိုးဝါးများမှာ. အတွက်ခရီးသွားလာ ဥရောပအတွက်အမြန်ဆုံးရထားအချို့ အဖြစ်အများအပြားမတော်တဆမှုဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး.
ဘယ်လိုရထားအခုတော့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏လုံခြုံဆုံး MODE တစ်ခုမှာ Is သေချာတာပေါ့ Be နိုင်သလား?
ဤတွင်ရထားပို့ဆောင်ရေး၏လုံခြုံဆုံးသည် Modes တစ်ခုဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ထိပ်တန်းအကြောင်းပြချက်အချို့ရှိပါတယ်:
နှစ်ဦးစလုံးရထားလမ်းနှင့်ရထားလုံလောက်စွာစောင့်ရှောက်ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်သည့်အခါ (တနည်း, မှန်မှန်ဝန်ဆောင်မှုပေး, ထိန်းသိမ်းထား, လိုအပ်တဲ့အခါအစားထိုး, စသည်တို့ကို), သငျသညျခဲအစဉ်အဆက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ဤနည်းလမ်းများနှင့်အတူမည်သည့်မတော်တဆမှုသက်သေခံပါလိမ့်မယ်. အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်, လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့မတူပဲ, တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းနှင့်တဦးတည်းခရီးသွားနည်းလမ်းရှိပါတယ် (တနည်း, မီးရထား) ယင်း၏နောက်ဆုံးဦးတည်ရာမှတဦးတည်းလမ်းကြောင်းသည်အောက်ပါ. အဘယ်သူမျှမမျှော်လင့်မထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်များသင့်ရဲ့လမ်းလာ, သင်ဘီးကျော်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးအောင်. အဘယ်သူမျှမရုတ်တရက်ဆိုင်းနှင့်အလှည့်ရှိပါတယ်, နှင့်အခြားစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်အလားအလာအန္တရာယ်များအခြေအနေများ. ဤသည်ရထားပို့ဆောင်ရေးယခုအချိန်အထိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏လုံခြုံဆုံးသည် Modes ထဲကတစ်ခုကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲကဖြစ်နိုင်သည်.
အဆိုပါရထားပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အလုံခြုံဆုံး mode ကိုတစျခုဖွစျပါသညျ
ကျနော်တို့လမ်းနှင့်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူရထားလမ်းနှိုင်းယှဉ်ဖို့ဖြစ်လျှင်, ကျနော်တို့အလွယ်တကူရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အန္တရာယ်အကင်းဆုံးနည်းလမ်းများတစ်ခုဖြစ်သည်ဒါပေမယ့်လည်းအများကြီးပိုကြောင်းသရုပ်ပြချင်ပါတယ် ရေရှည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြားမည်သည့်နည်းလမ်းထက်. ဘယ်လိုလဲ? ရထားအဖြစ်အများအပြားထုတ်လုပ်ကြဘူး CO2 ထုတ်လွှတ်မှု, နှင့်ရထားထုတ်လွှတ်မှုအထက်လေထုထဲသို့တိုက်ရိုက်ဖြန့်ချိကြသည်မဟုတ်. Plus အား, ရထားများလွန်းစွမ်းအင်သို့မဟုတ်အာကာသမပယ်မရှားပါဘူး, နှင့်၎င်းတို့၏ဆူညံသံအဆင့်ဆင့်နဲ့အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများထက်နည်းပါးလာများမှာ. Eco-သတိရှိသူအများစုသည်ခရီးသည်တင်ရထားများကိုသူတို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းအဖြစ်ရွေးချယ်ကြသည်. ဥရောပတစ်ဝှမ်းခရီးသွားများအတွက်, လွန်း, သူတို့ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီရင်ခံစာများနှင့်အတူရထား၏ Eco-friendly ကိုချစ်.
အပြင်ယခုတင်ပြသောထံမှ ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာအကြိုးကြေးဇူးမြား ကြောင်းများမှာ, တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ, မသာရထားပို့ဆောင်ရေး၏အလုံခြုံဆုံး mode ကိုတစျခုဖွစျပါသညျပေမယ့်စီးရထားကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြုံငုံနျြးမာရေးအတှကျအလှနျကောငျးမှဖြစ်ကြသည်.
သူတို့ကဘူတာရုံစွန့်ခွာပြီးနောက်မိမိတို့၏ရုံးများသို့မဟုတ်နေအိမ်များမှဆင်း Walk. ဒါကသူတို့ရဲ့ကောင်သည်ကြီးလှ၏
တစ်မောအိပ်ကိုယူ အလုပ်မလုပ်ဘဲစွန့်စားစရာမလိုဘဲအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်အလုပ်မှပြန်လာသည့်လမ်းတွင် ကားမှောက်မှု. အရေးပါသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုကာကွယ်တားဆီးရေး
နှစ်သက် အချက်များ A နှင့် B အကြားအပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများ. မကောင်းတဲ့ခံစားချက်ထဲကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြေလျော့ခြင်းနှင့်အရတစ်ဦးကစိတ်ကူးလမ်း
ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ, လူတိုင်း overworked နှင့်သူတို့၏အလုပ်မှာကုလားထိုင်များနှင့်အပြန်အလှန်၎င်းတို့၏မော်တော်ကားထိုင်ခုံကနေခုန်မယ့်အခါ,, အကြားအချို့ Chilling အချိန်ရှိခြင်းအလွန်အရေးပါသည်. သငျသညျအခက်အခဲအဖြစ်မီးရထားပေါ်မှာငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိခြင်းကျိန်းသေလူတွေရထားကိုရွေးချယ်ရခြင်းမှာအကြောင်းများစွာထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ခရီးဝေးရထား၏စကားပြောသော, သူတို့က ခရီးသွားလာရန်စိတ်ကူး option ကို သူတို့တချို့ကျချိန်ကိုခွင့်ပြုအဖြစ်. အမှတ် B ကိုမှအမှတ် A ကနေရယူခြင်းအတွက်2လေယာဉ်အားဖြင့်နာရီထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်ချ? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်စိန်ခေါ်ပါသလား “မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အလုံခြုံဆုံး mode ကိုတစျခုဖွစျပါသညျ”? သင့်ရဲ့နိုင်သလား ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကို ရာသီဥတု၏ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုကို process, လေထုဖိအား, နှင့်အကြားမှာရှိတဲ့တခြားအရာခပ်သိမ်း? ခဲခက်စွာ. အားဖြင့်ခရီးသွားလာအဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ ဥရောပတစ်ဝှမ်းရထား သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပြောင်းအလဲတွေဖို့အသုံးပြုရရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်နှင့်တစ်ဦးအတွက်သူတို့ကို process ကျန်းမာလမ်း.
ဝန်စည် (လုံခွုံမှု) အကျိုးကျေးဇူးများ
ကနျြးမာရေးတစ်ခုသို့မဟုတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရအတိအကျ အကျိုး, ဒါပေမယ့်အိတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအချို့ခရီးသည်များအတွက်တော်တော်လေးသိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍ. အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုသင်မယ်ဆိုရင် ခရီးသွားလာမှုအတွက် pack ကိုအလင်း ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ, သင်တဦးတည်းအပိုင်းအစ၌သင်တို့၏အိတ်ချင်တယ်. အများစုမှာခရီးသွားအဖိုးတန်အပိုငျးအများစုဆောင်းနေကြသည်, ရုပ်, စာရွက်စာတမ်းများ, စသည်တို့ကို. သူတို့နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အမှတ်တရများချင်. ကံမကောင်းသဖြင့်, လေကြောင်းခရီးသွား သင်ရထားဖြင့်ခရီးသွားသောအခါဖြစ်ခဲသောပျောက်ဆုံးပျက်စီးသွားသောခရီးဆောင်အိတ်များကြောင့်လူသိများသည်. Plus အား, သင့်ရဲ့အိတ်သင်တို့နှင့်အတူအစဉ်မပြတ်ဖြစ်ပြီး, ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမအိတ်ကိုပြောဆိုချက်ကိုမှာလုပျနိုငျ. ဒီရထားပို့ဆောင်ရေး၏လုံခြုံဆုံး Modes သာတစျဦးဖွစျသညျဟုပွောဖို့အကြောင်းပြချက် Is? ကျနော်တို့ဒါစဉ်းစား.
မီးရထားခရီးသွားလာလက်ဖက်ရည်လူတိုင်းရဲ့ခွက်ကိုမဟုတျပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေအလုံခြုံဆုံးခွက်တစ်ခုဖြစ်တယ်, နှင့်အများဆုံး အလွန်နှစ်သက်ဘွယ်ကောင်းသော သူမြားကို, လွန်း. သငျသညျ Next ကိုအချိန်များမှာ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်ခရီးလမ်းဆုံး, ကြောင်းရထားစဉ်းစားပါ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းများထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်, နှင့်ရထားခရီးသွားလာအခွင့်အလမ်းပေးဖို့တှနျ့ဆုတျပါဘူး. ဒါဟာအဆင်ပြေမယ့်, ကဘေးကင်းလုံခြုံမယ့်, ဒါကြောင့်စူပါချစ်စရာကောင်းရဲ့, ကာအတွေ့အကြုံကိုသင်ကအစဉ်အမြဲသတိရပါ့မယ်. သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် ဥရောပတစ်ဝှမ်းခရီးသွားလာ, မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် https://www.saveatrain.com ထက်နည်းသုံးမိနစ်၌သင်တို့၏လက်မှတ်ဘွတ်ကင်နှင့်သံလမ်းပေါ်တွင်သင်၏လုံခြုံခရီးသွားခံစားစတင်ရန်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-safest-transportation%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#ဖက်ရှင်ပျော့ Ravel #လုံခွုံသော #safetravel #သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး